Ireland to scrap most of its COVID-19 restrictions tomorrow | Ireland
Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » Ayarendi » Ireland kuti irase zvakawanda zvayo zveCOVID-19 zvirambidzo mangwana
Mutungamiriri weIreland, Micheal Martin
Indasitiri yevashanyi veIrish, iyo yakanyanya kuomeswa neimwe yeEurope yakaomesesa yekuvhara hurumende, yakatambira danho iri.
Mutungamiriri weIreland, Micheal Martin, akazivisa kuti hurumende yenyika yave kuda kudzima zvirango zvayo zvese zveCCIDID-19 neMugovera, Ndira 22.
"Takakunda dutu reOmicron," Martin akadaro muhurukuro yanhasi yeterevhizheni, umo akati mishonga yekudzivirira "yakashandura" mamiriro ezvinhu munyika.
“Ndakamira pano ndikataura nemi pamazuva akaipa zvikuru. Asi nhasi izuva rakanaka,” akadaro.
Ayarendi yaive neyechipiri-yepamusoro-soro yehutachiona hweCCIDID-19 muEurope svondo rapfuura asiwo imwe yemhando yepamusoro-soro yemakondinendi ekudzivirira kwekudzivirira, izvo zvakabatsira kuchengetedza huwandu hwevanhu vanorwara zvakanyanya pasi pepamusoro pekare.
Ayarendi yanga iri imwe yedzinonyanya kungwarira EU nyika panjodzi dzeCCIDID-19, ichiisa zvimwe zvezvirambidzo zvinotora nguva refu pakufamba uye kugamuchira vaenzi.
Asi mushure mekupfuura nemudutu re omicron musiyano wakakonzera kuwedzera kukuru kwezvirwere uye zvichitevera kuraira kubva kuvakuru vehutano, hurumende yakafunga kuti mabara nemarestaurant hazvichada kuvhara na8pm, chirambidzo chakaiswa mukupera kwegore rapfuura. omicron wave yakarova, kana kubvunza vatengi humbowo hwekudzivirira.
Makirabhu ehusiku akavhura mikova yavo kekutanga mumwedzi gumi nemapfumbamwe muna Gumiguru kuti avharwe zvakare mavhiki matanhatu gare gare.
Kugona munzvimbo dzemukati nekunze kwakagadzirirwawo kudzoka pakazara, zvichigadzira nzira yemhomho yevanhu kumakwikwi eRugby emwedzi unouya weSix Nations.
Mamwe matanho, akadai sekuda kupfeka mask pazvifambiso zveveruzhinji uye muzvitoro, acharamba aripo kusvika kupera kwaFebruary, Martin akadaro.
Ipo hupfumi hwakadzoka nekukurumidza gore rapfuura, vangangosvika chikamu chimwe muzvitatu chevashandirwi vakasarudza kumisa mutero uye mihoro yemumwe muvashandi gumi nevaviri ichiri kutsigirwa nehurongwa hwerubatsiro rwehurumende hunopera muna Kubvumbi.
Covid-19 Europe Ayarendi
MHAMBA ye Tourism inoshuvira zvizvarwa zveZimbabwe, Mzembi...
Ndege nyowani kubva kuToronto kuenda kuChicago, Barcelona...
Lithuania yakazivisa mamiriro enjodzi pamusoro pekutyisidzira kwe ...